FITAKIANA : Hanatevin-daharana ny hetsiky ny miaramila misotro ronono ny sendika hafa
Amin’ny sabotsy 26 aogositra ho avy izao no voatondro fa hanaovan’ ny fikambanana AMM izay hivondronan’ireo miaramila sy zandary misotro ronono ny hetsika lehibe karakarain’izy ireo. 21 août 2017
Hetsika izay voalaza fa mafimafy kokoa mihoatra noho ny efa natao hatramin’izay ary hivoahana ao anatin’ny fahanginana sy ny fandeferana vokatry ny fampanantenana poak’aty.
Tsy hihemotra amin’ny fanapahan-kevitra horaisiny ny fikambanan’ireo miaramila sy zandary misotro ronono na ny AMM. Etsy Andrefan’ Ambohijanahary izy ireo no hanao ny hetsika ary hanotrona azy ireo amin’izany ny fikambanana sendikaly hafa eto Madagasikara, anisan’izany ny Sendikan’ny Mpitsara eto Madagasikara na ny SMM.
Araka ny vaovao voaray dia handray fitenenana mandritra izany ny filohany, Fanirisoa Ernaivo izay hanatsikafona ny tsy fahombiazam-pitantanan’ny mpitondra amin’izao fotoana izao. Araka ny fanazavana avy amin’ny tompon’andraikitra eo anivon’ny AMM dia tsy hanao fanagatahana taratasy fahazoan-dalana hanaovana ny hetsika izy ireo satria ao anatina efitrano mikatona no hanatanterahany ny fihetsiketsehany.
Noho ny fampanantenana poak’aty nataon’ny fitondram-panjakana momba ny vola fisotroan-dronono tokony horaisin’izy ireo no antony lehibe tena hanaovana ny hetsika. Araka ny fanazavana hatrany dia “tamin’ny Filoham-pirenena ankehitriny mbola minisitry ny Fitantanam-bola sy ny teti-bola tamin’ny andron’ny tetezamita no efa nampanantena ny fikambanana izy fa amin’ny Repoblika fahaefatra no hanefana ny vola fisotroan-drononon’izy ireo satria mbola tsy manam-bola ny fanjakana amin’izao tetezamita izao. Izao anefa efa tonga eo amin’ny toeran’ny Filoham-pirenena ny tenany saingy mbola tsy hita izay fahatanterahan’ilay fampanantenana”, hoy ny nambaran’ny solontena avy ao amin’ny AMM.
Tsy hanaiky lembenana intsony izy ireo manoloana izay fa hanao hetsika goavana amin’izay satria raha ny fantatra dia efa nisy hatrany ny hetsika madinidinika nataon’izy ireo talohan’izao saingy tsy manao be marenina hatrany ny Fanjakana. Fantatra fa hatrany amin’ny enina arivo ny isan’ireo Zandary sy miaramila misotro ronono tokony hisitraka izay fisotroan-dronono izay ary misy amin’izy ireo no manana grady ambony. Hafampana indray, araka izany, ny toe-draharaha politika amin’ity herinandro ity.
Fikambanana maro no efa manambana hanao hetsi-bahoaka. Rahampitso ihany koa no fantatra fa hanatanteraka ny anjarany ny avy eo anivon’ny Herin’ny Fanovana.